Amakhasino aphezulu ayi-10 e-iPad - Amakhasino aphezulu e-iPad aku-inthanethi - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
I-Casino ephezulu ye-10 iPad - I-Casino ehamba phambili ye-iPad e-intanethi
(873 amavoti, isilinganiso: 4.00 out of 5)
Iyalayisha ... I-iPhone ye-Apple yaqala ukukhishwa ku-2007. I-iPhone ingena ngemvume kwi-Smartphones emhlabeni wonke, futhi kuzo zonke izizukulwane ezine zamanje ze-iPhone, i-smartphone ye-Apple iye yaba umholi emakethe yomhlaba wonke. Sekuyiminyaka, i-iPhone yi-smartphone ethandwa kakhulu futhi eyaziwa kakhulu, nakuba ukuncintisana okunzima kusuka kumafoni we-Android we-Android kuye kwenza imakethe ukuncintisana kancane eminyakeni yamuva.
I-iPhone / i-iPad yi-smartphone yakho ejwayelekile: ungenza izingcingo zezwi njenganoma iyiphi ifoni ephathekayo, kepha amandla e-Intanethi we-iPhone kusho ukuthi ungasebenzisa futhi ifoni ukuthumela ama-imeyili, imiyalezo, nezinye izinhlobo eziningi zemiyalezo. I-iPhone ne-iPad inesidlali semidiya esakhelwe ngaphakathi somculo nama-movie, isiphequluli sewebhu sokukunikeza ukufinyelela kwi-Inthanethi, ikhamera ekuvumela ukuthi uthathe izithombe namavidiyo, kanye nomtapo wezinhlelo zokusebenza noma "izinhlelo zokusebenza" ezenza ifoni yakho iwusizo nakakhulu. I-iPad / i-iPhone isebenzisa ukuthinta isikrini kukho konke okokufaka, kufaka phakathi ikhibhodi ebonakalayo.
Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 IPad Casino
Yiziphi iPhone / iPad Casino?
Ukudlala imfono ku-iPad noma i-iPhone yinto enkulu elandelayo ekugembula oku-intanethi. Kokubili i-iPads ne-iPhones zithola ukufinyelela kwamahhala nezinhlelo zokusebenza zokugembula ze-casino zokugembula kanye namapulatifomu avezwa amakhompiyutha amakhulu kunawo wonke namanye amabhizinisi okudlala. Amakhasino ajwayelekile e-inthanethi azama ukungena emakethe yemidlalo yeselula, ukukhulula izinhlelo zokusebenza kanye namageyimu okudlala okusheshayo e-iPhone okusetshenziswa kudivayisi yakho yeselula noma nge-smartphone.
Amakhasino e-iOS anika abasebenzisi be-iPhone ne-iPad isasasa nobumnandi bokugembula kwekhasino entendeni yesandla sabo, kutholakala noma yikuphi lapho i-iPhone yakho ingafinyelela khona kwi-Intanethi. Imvelo ephathekayo yama-iPads nama-iPhones yi-draw enkulu yabadlali bezokugembula, abafuna ukudlala ama-slots abawathandayo, izihloko ze-poker video, kanye nezifundo zasekhasino ezinjenge-blackjack, i-roulette, i-bingo, neminye imidlalo evela ku-smartphone yabo. Ukugembula kwamaselula kumnandi futhi kunenzuzo enkulu. Futhi kuyinto enkulu elandelayo ekugembuleni okuku-inthanethi, njengoba amasayithi exakekile ukuhlinzeka ngezinketho zokudlala ze-smartphone kumakhasimende abo.
I-iPhone ne-iPad Online Casino Games
Lapho abantu beqala ukufunda ngokugembula kwe-iPad ne-iPhone, bafuna ukwazi ngezinhlobo zemidlalo abasebenzisi be-iOS abangafinyelela kuzo. Imidlalo yangempela yemali etholakala kubasebenzisi be-iPad nabakwa-iPhone ifana kakhulu nezihloko zendabuko zokugembula eziku-inthanethi. Noma yimuphi umdlalo okhona ekhasino eku-inthanethi ekugcineni uzotholakala ku-iPhone nakwabanye abasebenzisi be-smartphone.
Okwamanje, uhlu lwemidlalo ye-casino e-intanethi yemali etholakalayo kubasebenzisi be-smartphone lunqunyelwe. Ukugembula komakhalekhukhwini kuyinto entsha, ngakho-ke imidlalo entsha nezindawo zokugembula ziyavela njalo. Njengalokhu kubhala, ungadlala izigaba ezifana ne-blackjack, i-roulette, ngisho ne-bingo kanye neminye imidlalo ekhethekile, kanye ne-casino yokugembula okuthandayo njengezintambo nevidiyo ye-poker.
Umkhuba wakamuva wokugembula ku-inthanethi ukwenziwa kwezinguqulo ze-iPhone ne-iPad zezintandokazi zamakhasino aku-inthanethi. IMicrogaming manje yenza isihloko sayo esithandwayo se-Slots Mega Moolah sitholakale kubasebenzisi be-smartphone ne-iPhone. IMega Moolah inikeza ama-jackpots amakhulu aqhubekela phambili avame ukungena ezigidini zamadola, futhi ngokufinyelela kuMega Moolah ku-iPhone yakho, ungaxosha ama-jackpots amakhulu aqhubekayo ku-iPhone yakho noma kwenye i-smartphone.
Uma ucabanga ukufaka ukugembula kwe-iPhone noma i-iPad ekukhethweni kwakho kokudlala ku-intanethi, yazi ukuthi ingxenye enkulu ufinyelela emidlalweni efanayo oyothola kumasayithi we-casino e-intanethi, nemidlalo eminingi ivela ngaso sonke isikhathi. I-iPhone yokugembula iyimakethe ephumayo enezihloko ezintsha namasayithi amasha avela sonke isikhathi. Uma ungawutholi umdlalo owufunayo ku-bat, vele ube nesineke. I-iPhone yokugembula iqhuma ekuthandeni futhi ungakwazi ukugembula umdlalo wakho ozithandayo noma i-casino enkundleni eyintandokazi izoba nezinketho ze-iPhone zokugembula maduzane.
I-iPhone / iPad Casino vs. Amasiko we-Casino e-Traditional
Umehluko omkhulu phakathi kokugembula kwekhasino ku-laptop yakho noma kusiphequluli sakho sewebhu nokudlala imidlalo ye-casino ku-iPhone yakho noma i-iPad ukuphatheka kokubili kwamadivayisi eselula. Noma yikuphi indawo i-iPhone yakho noma i-iPad yokufinyelela kwewebhu ingaba indawo yokugembula enkundleni: ukudlala izinkinobho ze-inthanethi ebhasini, ngesikhathi sokuphumula emsebenzini, uhambo olude, noma ngabe ikuphi lapho ungasebenzisa i-iPhone / iPad yakho.
Omunye umehluko omkhulu phakathi kokudlala imidlalo ye-casino ku-iPhone yakho futhi ukudlala kwi-casino ye-intanethi ukuthi ngeke ube nezinketho eziningi ze-iPhone zokugembula njengoba wenza ngekhamera ye-intanethi yendabuko. Kungenxa yokuthi amakhasino e-iPhone / iPad yimakethe ekhulayo, nokudala imidlalo ye-casino esebenzayo
I-iPhone platform iyabiza futhi idla isikhathi.
Ukufana phakathi kwamakhasino e-iPhone namakhasino asekelwe kuwebhu amaningi. Okuningi kwalokho amakhasimende abathanda mayelana namakhasino ase-intanethi atholakala kuma-casino e-iPhone. I-iPhone yamakhasino namanje inikeza amabhonasi nezinhlelo zokukhangisa ezenzelwe ukukuvuza ngokuthembeka kwakho. I-iPhone casino inikeza ukusekelwa kwamasevisi kwamakhasimende uma unenkinga yezobuchwepheshe noma imibuzo mayelana ne-akhawunti yakho. Futhi, njenge-casino ye-iPhone ekhula ekuthandeni, ungalindela okuningi okuthandwa yi-casino yakho yezintandokazi ze-intanethi ukuthi itholakale ku-iPhone yakho.
Indlela yokukhetha i-iPhone ephephile nevikelekile / i-iPad Real Money Casino
Ukukhetha i-iPhone / iPad casino kufana kakhulu nokukhetha amakhasino wendabuko asuselwa kuwebhu. Zonke izici ozilindele kumakhasino e-Inthanethi ziyatholakala kuzinhlelo zokusebenza zekhasino ezenzelwe i-iPhone: ukuhlukahluka komdlalo, izinketho zesevisi yamakhasimende, amabhonasi & ukukhushulwa, kanye nezinketho ezahlukahlukene zokufaka kanye nokuhoxa.
Uma ukhetha i-iPad / iPhone casino, qiniseka ukuthi wenza ibhizinisi ngomhlinzeki odlala ngokusemthethweni wekhasino. Lokhu kusho ukufuna isitifiketi, ukufunda ukubuyekezwa kwamakhasimende ku-intanethi, nokwenza umsebenzi wesikole ngaphambi kokuba unqume ukuxhasa i-akhawunti yakho yomdlali.
Inothi lokugcina ekukhetheni imali yangempela ye-iPad / iPhone casino: ukudlala i-iPad / iPhone imidlalo yekhasino eyenziwe ngamakhasino ase-intanethi kuwumqondo omuhle. Lokhu kuyiqiniso ikakhulu uma usuvele unayo i-akhawunti yomdlali ku-casino e-intanethi. Amakhasino amaningi ase-intanethi asetshenziselwa ukuthuthukisa i-casino imidlalo, ngakho hlola ukubona ukuthi i-casino yakho ye-intanethi inikeza imidlalo yedivayisi yakho yeselula ngaphambi kokuya ukufuna umhlinzeki omusha wegeyimu.
0.1 Uhlu lwezindawo eziphezulu ze-10 IPad Casino
2.1 Yiziphi iPhone / iPad Casino?
2.2 I-iPhone ne-iPad Online Casino Games
2.3 I-iPhone / iPad Casino vs. Amasiko we-Casino e-Traditional
2.4 I-iPhone platform iyabiza futhi idla isikhathi.
2.5 Indlela yokukhetha i-iPhone ephephile nevikelekile / i-iPad Real Money Casino